थाहा खबर: प्रेमपत्र
अटुट सम्झना, अथाह प्यार, अनि यो जलिरहेको हृदयको भित्री कापबाट प्रेमिल सम्बोधन तिमीलाई।
असिम समय आफैंमा खतरनाक छ, म कुनै प्रख्यात चित्रकार होइन तर आज समयले मेरो अगाडि एउटा क्यानभास राखिदिएको छ। अक्षरका रङहरू पोत्न हाजिर छु। थाहा छैन यो क्यानभासमा तिमीलाई अक्षरले पोत्दै गर्दा तिमी सालीन देखिन सक्छौ या मोनालिसाजस्तो रहस्यमय मुस्कुराइरहेको। यद्यपि, समयको अगाडि नहार्ने वाचा गरेर यो जोखिम मोल्दै छु।
आज लाग्दै छ म तिम्रो सम्बोधनको अधिकारी हुँ र होइन पनि। हुँ यस अर्थमा हामीसँग मजबुत विगत र आशावादी भविष्‍य छ। होइन यस अर्थमा वर्तमानले हामीलाई टाढा राखिदिएको छ। हिजो समय हाम्रो पक्षमा थियो आज छैन र भोलि हुन सक्छ।
असिम मैले बिर्सिएकी छैन, सेती बगरमा हामीले खेल्ने गरेको भाँडाकुटी, बालुवाको मन्दिर।
ए साच्ची! कहिलेकाहीँ नदी रिसाउँदा मेटायो कि नाइँ होला बालुवामा लेखेको नाम। त्यो नजानिँदो बेलामै भनेथ्यौँ, 'हामी सँगै पढ्ने, खेल्ने तर सोचेजस्तो नहुँदो रहेछ।' हाम्रो एसएलसीपछि, जब हामी बुझ्‍ने भएका थियौँ तिमी सपरिवार काठमाडौं लाग्यौ र मलाई यो पोखरा शून्य लगिरह्यो। चरीले छोडेर गएको गुँडजस्तो। मलाई ब्युँझाउन सकेन लेकसाइडमा नयाँ वर्षको सडक महोत्सवले, सकेन चाक्लो न्युरोडमा हतार गरिरहने सवारीको कोलाहलले। मेरो खुसी कतै छुटेजस्तो भइरह्यो। त्यसपश्चात् न हो सधैँ विरह गाइरहने नदी मेरो आफ्नो भयो। कहिलेकाहीँ नदीमा ढुंगा फाल्छु र खलबलिएको गति देखेर लाग्छ, यसरी नै खलबलियोस् समयको लय र फर्कन सकौँ सुन्दर विगतमा।
असिम, यो समय मैले महसुस गरिरहेकी छु, हिजो मसँग कोही थियो जो आज चोर बनेर निस्कियो। जब मैले उसलाई चोर भनेर चिनेँ ऊ धेरै टाढा पुगिसकेको रहेछ। एउटा यस्तो चोर जसले मेरो आफ्नू भन्नु एउटा भएको दिल पनि चोरेर फरार भएको छ। अक्सर चोरीकाण्डमा प्रहरी प्रशासन चोरको खोजी गर्छ सजायको लागि र घटना भयानक बन्छ। यसपालि पनि घटना त भयानक नै छ, तर म आफैँ चोरको ठेगाना खोजिरहेकी छु। सजाय दिन होइन, एकपटक उसलाई पनि चोरिदिन।
कहिलेकाहीँ तिमीकहाँबाट आएर हावाले मेरो कानमा खुसुक्क भन्छ असिमले पनि तलाई सम्झिरहन्छ। ए असिम के यो हावाले भनेको साँचो हो? हो भने यसरी नै खबर पठाइरहनु है। मलाई थाहा छ तिमीले पनि सस्मितको सम्झनामा थुप्रै घडी समयहरूलाई श्रदाञ्‍जली दिइसकेका छौ।
असिम तिमीले बुझेजस्तै म आशावादी मान्छे हुँ र आशावादी छु। यो पत्र पाउनासाथ अविलम्ब, तिमीले तिम्री सस्मितलाई पत्र कोर्नेछौ। अनि हामीहरू मधुमालतीझैँ वायुपंखी घोडामा चढेर एउटा प्रेमको बस्तीमा पुग्‍नेछौँ जहाँ प्रेमिल जोडीहरूको बास हुन्छ।
उही तिम्रो प्रतीक्षा